သင်ကဥရောပရထားဝန်ဆောင်မှုကိုသတိရနေတယ်မပြောသင့်အဘယ်ကြောင့် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > သင်ကဥရောပရထားဝန်ဆောင်မှုကိုသတိရနေတယ်မပြောသင့်အဘယ်ကြောင့်
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 18/06/2020)
ကျနော်တို့ကအမြဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နယ်လှည့်စေရန်ကြိုးစား အတှေ့အကွုံ ပိုကောင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများလျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပိုက်ဆံကယ်ဖို့လှည့်ကွက်, အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု. ရေခြားမြေခြားတစ်အားလပ်ရက်ခံစားခြင်း ခရီးစဉ် သင်အချိန်ကိုလုပ်ချင်ဆိုလိုတယ် ထူးခြားတဲ့.
ဥရောပတစ်ခရီးစဉ်ရာ၌ခန့်ထားပြီသူတွေကိုအဲဒီမှာအမှုအရာအတော်များများခံစားခဲ့ရနှင့်ခရီးသွား trans ဆိုတဲ့-ဥရောပမှတဆင့် မီးရထားဝန်ဆောင်မှု ကျိန်းသေသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်.
ဥရောပအရှိဆုံးထူးခြားဆန်းပြားတချို့၏တိုက်ကြီးဖြစ်ပါသည် ခရီးသည် နေရာများနှင့်သင်ခံစားရန်စီစဉ်နေကြသည်လျှင် လှပသောပွညျ၏အကောင်းဆုံးအမြင်, trans ဆိုတဲ့-ဥရောပရထားဝန်ဆောင်မှုကြိုးစားကြ, သငျသညျအများကြီးခံစားနိုင်ရှိရာ အွန်လိုင်းငါ၏အမီးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်အပါအဝင်အဆောက်အ. ဘလော့ဂ်ကတဆင့်သွားပြီးသင်သည်လက်လွတ်မသငျ့သညျအဘယျကွောငျ့သငျယူဖို့ ဒီအံ့သြဖွယ် ရထားခရီး သည့်အခါဥရောပတိုက်တွင်.
ခရီးပိုအရေးကြီး Is လိုက်တဲ့အခါ
အချို့သောလူများအတွက်, ခရီးသငျသညျများမှာအထူးသဖြင့်အခါ destination သို့ရောက်ရှိထက်ပိုအရေးကြီးတယ် တစ်ဦးတိုးရစ်အဖြစ်ခရီးသွား. သငျသညျဥရောပမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်လေ့လာစူးစမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မနေသင့် နီးစပ်ထဲကနေလှပသောတိုက်ကြီး.
ရထားခရီးသင်သည်သင်၏ဥရောပခရီးစဉ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှါအခွင့်အလမ်းကိုပေးတော်မူ၏. အဆိုပါပျော်မွေ့ ဇိမ်ခံရထားခရီးသွား သို့ ၏အားသာချက်နှင့်အတူဥရောပအတွင်းအများအပြားတွင် Destinations ကိုရောက်ရှိ အွန်လိုင်းငါ၏အမီးရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် option ကို.
ဥရောပတချို့၏မူလနေရာဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးရထားအော်ပရေတာ ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ဒီမှာသင်ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းကိုခံစားနိုင်ပါတယ် နေပါစေသင့်ရဲ့ဦးတည်ရာသည်အဘယ်အရာရထားခရီး. ဂျာမန်ရထားလမ်း, OBB, TGVLyria, Thalys နှင့် Eurostar များမှာ ဥရောပမှာရှိတဲ့ဦးဆောင်ရထားအော်ပရေတာအချို့.
သင်၏အထဲမှာတပ်မက်လိုချင်သောအနေရာများရောက်ရှိဖို့အများအပြားဥရောပမြို့ကြီးများမှအမီးရထားဝန်ဆောင်မှုကိုခံစားနိုင်ပါတယ် ဥရောပ. သငျသညျအမ်စတာဒမ်မှသွားလာလို့ရပါတယ် လန်ဒန်, ဘာလင် ဟမ်းဘတ်မှ, Naples သို့ ရောမမြို့, မီလန်မှ ဗင်းနစ်, ပဲရစ်မှလန်ဒန်, ဘာလင်မှလန်ဒန်, ဗီယင်နာ သို့ မြူးနစ် နှင့်အခြားသောနေရာများ. ထိုအခါအကောင်းဆုံး စိတျအပိုငျးသငျသညျစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုငါ့ရထားလက်မှတ်၏ထို option ဘယ်အချိန်မဆိုခံစားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ.
ဤသူကားအ အခြားအားသာချက် Trans-ဥရောပ သာ. နှစ်သက်၏ မီးရထားဝန်ဆောင်မှု အဆိုပါခံစားရန် ပွညျသူပွညျသားအလှ. ဒါဟာ သင်တို့နေရာအရေးမပါဘူး, သင်ဆဲသင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်အွန်လိုင်းဘွတ်ကင်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျခရီးသွားစီစဉ်ထားကြလျှင် တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဒေတာများအပေါ်ပဲရစ်ကနေအမ်စတာဒမ်, သငျသညျ pre-ဘွတ်ကင်စက်ရုံသုံးပြီးသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံ secure နိုင်ပါတယ်. သငျသညျ အဆိုပါသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် တာဝန်ရှိသူတဦးကရထားက်ဘ်ဆိုက် third-party ရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်သင့်လက်မှတ်ဘွတ်ကင် ငါ၏အမီးရထားလက်မှတ်အွန်လိုင်းဘယ်နေရာမှာမဆိုနေတဲ့စာအုပ်ကတဆင့်ချေးငွေသို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုသုံးပြီး.
ဤရွေ့ကားလာသောအခါဥရောပ၌သငျ trans ဆိုတဲ့-ဥရောပရထားဝန်ဆောင်မှုလက်လွတ်မသငျ့သညျအဘယျကွောငျ့အကြောင်းပြချက်အချို့ရှိပါတယ်. ရထားဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်, အချိန်ဇယား, နှင့်လက်မှတ်ဘွတ်ကင်စက်ရုံ, သငျသညျသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် – www.saveatrain.com
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/reasons-why-you-should-not-miss-trans-european-train-service/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကသို့မဟုတ် / ru နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / က de ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#သီရိ အလို့ငှာ eurotrip ရထားခရီးသွား